प्रम ओलीले संसद्मा भनेको नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा तयार भयो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश भएको यो नयाँ नक्साअनुसार हामीले जमिन दाबी गर्ने हो कि पुरानै नेपालको नक्साअनुसारको जमिनमा ? पिपुल्स डेमोक्रेसीमा धेरै कुरा बुझ्न साँच्चै कठिन रहेछ !
उता लिपुलेक फर्काउन जानु छ, यता कोरोनाले पछ्याएको छ। कोरोना भनेको महाकाल रहेछ। महाकाल अर्थात् मृत्यु। एकातिर कर्तव्य, अर्कातिर त्रास। नेपालीको जीवन सधैँ आश र त्रासको शिकार हुने भयो।
माओवादीको बन्द, राजाको बन्द, भुइँचालोपछिको बन्द...अहिलेसम्मका कुनै पनि बन्दमा काठमाडौँ यति चकमन्न कहिल्यै थिएन। यति मेहनतसाथ सेवा गर्दा पनि कोरोनाले दुःख दिएको सुनियो भने भनिदिए हुन्छ– सरकार नै नालायक छ।
महामारीमा मानिसको मृत्यु हुन थाल्यो भने अनर्थ हुन्छ। हामी कोरोनाले मृत्यु ल्याएको भन्छौँ। त्यसको कारण अरू रोग पनि हुन सक्छ। सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र जनता सबै आत्तिएको अवस्था कठिन हुन्छ। मृत्युलाई नगिजलौँ। जीवन महŒवपूर्ण छ।
आफ्नो स्वास्थ्यले गर्दा चर्पीमा नै तीन घण्टा बिताउनुपर्ने कारण देखाएर २०४७ सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्याग्ने एक मात्र राजनेता हुनुहुन्थ्यो, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह। अचेल त प्रधानमन्त्रीको आसनबाट सोझै आर्यघाट पुग्ने चाहनाले ढपक्क ढाकेको छ, देशको राजनीतिलाई।
कोरोनाविरुद्धको प्रचार यति नकारात्मक छ, यसले नेपालीलाई डरको समुद्रमा जलसमाधि लिनपर्नेमा विश्वस्त तुल्याएको छ। मानिस मर्नुअघि आफ्ना इच्छा पूरा गर्न चाहन्छन्। प्रचार किन यति नकारात्मक छ ? साबुन, स्यानिटाइजरका बोतल र मास्क किन्न सक्ने र जान्ने जनता कति छन् ? सरकारलाई थाहा छ ?
बाँचे पनि, मरे पनि आफ्नै देशमा ! देशभक्त नेपालीको चाहना यही नै हो। यसैकारण रोजगारीका लागि विदेशिएकालाई यो कोरोना–कालमा जतिसक्दो छिटो देश भिœयाउनु सरकारको परम दायित्व हो।
सबै प्रम क्लाउनिङ गरिएका हुन्, म्याडम टुसाडका मोमका पुतलाजस्ता। ओलीभन्दा झलनाथ के कम ? झलनाथभन्दा माधव के कम ? यी सबैभन्दा प्रचण्ड के कम ? अनि, प्रतिपक्षका देउवा कोभन्दा को कम ? सबै हामपुरे !
उबेला नेकपा पनि धेरै थिए, अनेरास्ववियु पनि धेरै। हिन्दी सिनेमाका हिरोहरू नेपालीलाई दरबान–सरबान भनेर अन्टसन्ट बोल्थे। अनेरावालाहरू त्यस्तो हिरोको सिनेमा बहिष्कार गर्थे। यो लकडाउन त्यो जमानामा बहिष्कृत फिल्म हेर्ने समय आएको छ।